प्युठान घ’ट’ना ३आमा छोरी संगै झु’न्डिनुको यस्तो छ कारण? | समाचार
June 1, 2021 June 1, 2021 NepstokLeaveaComment on प्युठान घ’ट’ना ३आमा छोरी संगै झु’न्डिनुको यस्तो छ कारण?
प्यूठानमा छोराछोरी र आमा जंगलमा झु’ण्डिएको अवस्थामा भेटिएका छन् । प्यूठान नगरपालिका वडा नम्वर १ स्थित चेरनेटा नजिकको जंगलमा तीन जना रुखमा झु’ण्डिएको अवस्थामा फे’ला परेको प्र’हरीले जनाएको छ । मृ’तक प्यूठान नगरपालिका वडा नम्वर २ चितिखोलाकी २६ वर्षीया गायत्री सुनार, उनको २ वर्षको छोरा र ५ वर्षको छोरी रहेको खुलेको छ ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
हिजो साँझ घरबाट माइत जान हिडेको गायत्रीका ससुरा गिरबहादुर सुनारले बताउनुभयो । गायत्रीको माइत स्वर्गद्वारी नगरपालकिा वडा नम्वर ८ हदचौर पर्दछ । श्रीमान प्रकाश सुनार रोजगारकिो शलिशलिामा भारतमा रहेको बताईएको छ । श’व पो’ष्ट मार्टमका लागि प्यूठान अस्पतालमा लगिएको छ । घ’टनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्र’हरी निरिक्षण देवीप्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
सोच्न नसकिने घ’टना घ’टेपछि गायत्रीको श्रीमान मिडिया मा आएका छन्। उनले किन यस्तो गरेको होला मैले कुनै कुराको कमि गराएको थिएन भन्दै भ’क्कानिए। मैले धेरै दु’ख गरेर आफ्नै हातले छोराछोरि हुर्काए मलाई धेरै याद आईरहेको छ। हामीहरुको झ’गडा पनि हुने थिएन ,कहिले काही मात्र अलि अलि भ’नाभन मात्रै हुन्थ्यो। श्रीमान श्रीमती भएपछि सामान्य झ’गडा सबै को हुन्छ। श्रीमतीले यस्तो गर्नु भन्दा पहिले एक पटक मात्र फोनमा झ’गडा भएको थियो। बाकि जानकारी भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस्।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**